Ogaden News Agency (ONA) – Maamulada JOKA oo shirar is daba joog ah isugu yimid
Maamulada JOKA oo shirar is daba joog ah isugu yimid
Posted by Daljir	/ May 22, 2014
Maamulka jaaliyada Ogaadeeniya ee wadanka Koonfur Afrika ayaa labadii maalmood ee oogu danbaysay ku jiray shirar isdaba joog ah kusaas oo ay isugu yimaadeen hawl wadeenka JOKA ee wadanka Koonfur Afrika.
Shirkan ayaa dhexmaray maalintii koobaad Gudida iyo Gudi hoosaadka Xarunta,wuxuuna ugudbay marxaladii labaad oo ay ka soo qayb galeen dhamaanba maamulada Xarunta iyo Faracyada.
Shirarka ayaa lagu gorfeeyay umuuro dhawr ah oo udub dhexaad u noqon doona Hawlaha Halganka Xaqa ah ee shacabka Ogaadeeniya kudoonayo Xoriyadiisa.
Go,aamadii laqaatay waxaa kamid ahaa in dhamaanba wadanka Koonfur Afrika laga bilaabo Abaabul balaadhan oo lagu wacyi galinayo dhammaanba bulsho waynta soomaaliyeed iyo dadka Reer Koonfur Afrika.Si loo helo taageero dhan walba ah oo lala garab istaago Halganka Xaqa ah ee Ay hormuudka katahay JWXO.
Shirarkan oo maalintii hore kadhacay Xafiiska Xarunta JOKA,qaybtiisii labaadna lagu wadaagay khadka isgaadhsiinta (Skype) ayuu Gudoomiyaha JOKA Mudane Maxamed Daahir iyo gudidiisu meel marin hayeen qorshayaasha iyo go aamada isla markaana waxaa si gooni ah loo magacaabay gudiyo loogu talagalay in ay fuliyaan go aamada abaabulka iyo wacyi galinta Bulshada.
Shirarkan ayaa kusoo aaday xili ay Saafaarada TPLF ee K/Afrika iyo Jawaasiisteedu wadaan Falal aan waxba ka ahayn JOKA agteeda waxayna JOKA mar walba u taagan tahay fashilinta iyo kashifka cadawga iyo cadaw kalkaalka.
Waxaad maalmaha soosocda dheehan doontaan shirar isdaba joog ah oo bulshada qaybaheeda kala duwan loogu qaban doono. Gobolada wadanka koonfur Afrika ee kala duwan in sha allah.